Kenya oo Denmark ka diiday iney kusoo celiso qaxooti Soomaali ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Dowladda Kenya ayaa diiday iney qaabisho qaxooti Soomaali ah oo dalka Denmark doonayo inuu kusoo celiyo dalkaas. Codsigaan ayaa waxaa Denmark jeedisay kadib markii Axsaabta Mucaaradka ee dalkaas soo jeediyeen arrintaas.
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee dalka Kenya, Mwenda Najoka ayaa gaashaanka ku dhuftay codsiga Denmark, wuxuuna ku tilmaamay go’aankaasi xudduud lagu faquuqayo Soomaalida.
“Waddan kasta waxa ku waajib ku ah inay Qaxootiga u oggolaadaan dalkooda” ayuu yiri Afhayeenka oo intaasi ku daray in Kenya Qaxooti ku filan joogaan.
Waxa uu intaasi ku daray inay Kenya martigelisay 600,000 oo Qaxooti ka yimid Somalia, halka ay Denmark marti-gelisay 16,000 oo Qaxooti Somali ah.
Sedexda Xisbi ee Mucaaradka ee dalka Denmark ee kala ah (Danish People’s Party, Liberal Alliance and Venstre) ayaa soo bandhigay Hindise ku aadan in Qaxootiga Soomaalida ku nool dalkooda Xerooyin looga sameeyo dalka Kenya.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalka Kenya ayaa sheegtay in ay gaashaanka udarooreen maanta oo Axad ah codsi kaga yimid dowlada Denmark,isagoona waziirka uu sheegay incodsigaas uu yahay mid aan sax aheen Kenya ay aad ugu carootay.
Dhanka kale Mr Mwenda Njoka, oo ah afhayeenka wasaaradda arimaha gudaha dalka Kenya ayaa yiri “waa maxay sawabta ay qaxootiga somalida ay dalkooda uga soo kaxeynayaan,ma aham mid sax ah mana ogolaaneeno cidsiga noocaasi ah ayuu ku afmeeray hadalkiisa.
Wadan kasta oo aduunka waxaa waajib ku ah in ay u oggolaadaan dadka qaxootiga ah ee dalkooda galaya, ” Kenya waxaa ay martigalisay 600,000 oo qaxooti Soomaaliya halka dalka Denmarka ay qaxoti ku yiyiin 16,000 oo kaliya marka ma ogolaan doono in qaxootigaas somalida ah eek u nool Denmarka dalkeeda lagu soo celiyo ayuu kusoo afmeeray hadalkiisa wasaaradda arimaha gudaha dalka Kenya.
Xisbiga talada dalkaasi hayo ee The Social Democratic Party ayaa waxa uu ka soo hor-jeestay warka ay soo saareen Xisbiyadda Mucaaradka ee ah in Soomaalida Qaxootiga ku ah Denmark in Xerooyin looga sameeyay saddex waddan oo Afrikaan ah oo ay Kenya ka mid tahay.
Sanadkii la soo dhaafay, dowladda Denmark ayaa celisay dad magangalyo-doon ah oo Soomaaliyeed kuwaasoo iyadoona shegtay in ay xaaladda ammaanka caasimadda Soomaaliya uu soo hagaagayo, sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay wargeyska Post Copenhagen.
Warbixintaan ayaa waxaa lagu qoray inta badan wargeysyada dalka Kenya iyo kuwa wadanka Danmarka waxaana ciwaan loogu dhigay “Ceshta Qaxootigiina” Sannadkii la soo dhaafay, Dowladda Denmark ayaa ka fekertay inay qaxootiga Soomaalida dib ugu celiso magaalladda Muqdisho, iyadoo sheegtay in Xaalladda Ammaanka Muqdisho soo hagaagayso, sida lagu soo daabacay Wargeyska The Copenhagen Post.
Dhawaan dowladda Soomaaliya ayaa dalka Norway dib ugu celisay dhgowr qof oo Soomaali ah, kuwaasoo ay si qasab ah kusoo celisay dowladda dalkaas.